Iphupha kunye negosa Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Umsebenzi waseburhulumenteni ungowenkonzo yoluntu eJamani. Inamagunya azimeleyo, ke inokwenza izigqibo ezizezandleni zoMbuso kuphela. Amagosa abandakanya, umzekelo, amagosa asebupoliseni, kunye neejaji nabatshutshisi, kwaye kwezinye iimeko nootitshala nabasebenzi bakarhulumente.
Igosa lonyulwa ubomi kwaye linamalungelo athile kunye nemisebenzi. Umqeshi unyanzelekile ukuba akuhlawule ngokwaneleyo, akuxhase ebudaleni, kwaye akuxhase ngemali xa ugula. Igosa, lona, ​​kufuneka lithathe isifungo senkonzo kwaye lizibophelele ekuthobeleni umthetho kunye noxanduva lokuthobela. Umzekelo, awuvumelekanga kugwayimbo.
Iphupha malunga negosa linokoyikisa ukuba umphuphi ulufumana njengegunya elisebenzisa kakubi amandla alo. Unokufumana uncedo kunye nenkxaso phambi kwepolisa okanye ijaji. Umxholo wephupha kunye neemvakalelo zomntu oleleyo kufuneka ziqwalaselwe ukutolikwa kwamaphupha.
1 Uphawu "olusemthethweni" - ukutolikwa ngokubanzi
2 Umqondiso wephupha «elisemthethweni» - ukutolikwa kwengqondo
3 Umqondiso wephupha «elisemthethweni» - ukutolikwa kokomoya
Uphawu "olusemthethweni" - ukutolikwa ngokubanzi
Ukujongana negosa luphawu olungathandekiyo ngokokuhlaziywa kwesiko lamaphupha. Uphawu lwephupha lubonisa oko amaxesha oxinzelelo Ukuphuma kwelanga. Umphuphi unokulindela ubunzima kwimicimbi yabucala okanye yobungcali, mhlawumbi nokukhathazeka kosapho.
Ngaphakathi ekutolikeni kwamaphupha athandwayo, kubalulekile ukuba umntu ulele njani ephupheni kwigosa. Ukuba uphikisana naye, kufanelekile. Iingxabano imbeko, cinga kakuhle. Mhlawumbi enyanisweni kukho nesoyikiso sokumangalelwa. Ukuba umphuphi unika imali kwigosa, umfanekiso wephupha ubhengeza ilahleko yemali.
Nangona kunjalo, ngokuhlalutya kwephupha, ukuphazamiseka kunokuphela ukuba umntu olele ukhetha ngokucophelela amagama akhe ngexesha lengxoxo ephupheni. Ngu Atención Xa ujongene negosa, ukuphupha kungayijika intlanganiso ibe yinzuzo. Isimboli yephupha ikwangumqondiso woxolelwaniso nomhlobo okanye ilungu losapho.
Ukuba umphuphi uzibona njengegosa, uphawu lwephupha luthembisa elinye ukuphuculwa isikhundla somntu. Kwingcaciso ngokubanzi yephupha, iphupha libonisa ukuba umntu oleleyo uya kufezekisa iinjongo zakhe kuphela ngeendlela ezingaqhelekanga kunye nemizamo. Ukongeza, umfanekiso wephupha umele imisebenzi engakumbi nangakumbi.
Umqondiso wephupha «elisemthethweni» - ukutolikwa kwengqondo
Kuhlalutyo lwengqondo lwamaphupha, igosa liquka into enye ngaphezu kwayo yonke into Igosa eligunyazisiweyo. Isimboli yamaphupha ibonisa umntu ovela kumbhali wamaphupha omkhokelayo. Ngokwesiqhelo lo ngutata okanye umama. Into ebalulekileyo ziinkumbulo zamava okwenyani omntu olalayo. Ukuba iphupha elo libonakaliswa luloyiko, kuya kufuneka ukuba uve ubunzima bobuzali babazali bakho. I-subconscious izama ukoyisa olu loyiko lufihliweyo kunye nomfanekiso wephupha.
Isimboli yamaphupha "yabasebenzi bakarhulumente" ihlala iluphawu lomgangatho wamaphupha, anefuthe lesikhokelo kubomi bokwenyani kwaye inefuthe elibonakalayo kuzo zonke izigqibo. Mhlawumbi oku Isabelo sobuntu Ayikhuli ngokunamandla ngalo mzuzu okanye ayizibonakalisi kumbono wangaphandle.Ngokucaciswa kwephupha, iphupha elo ke libonisa umnqweno wokuba lilungu leqela elilungelelanisiweyo njengembuyekezo.
Ukuba umntu ophuphayo uzifumana ekwigosa, enyanisweni uhlala ehlupheka kwimisebenzi engaphezulu. Ngokwengcaciso yokutolikwa kwengqondo yamaphupha, umfanekiso wephupha umele imvakalelo ye Ukugqithisa I-subconscious icacisa ngephupha imfuneko yenkululeko enkulu ngokubhekisele kubomi bobuqu kunye nophuhliso lobuntu.
Umqondiso wephupha «elisemthethweni» - ukutolikwa kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, uphawu lwephupha "olusemthethweni" luquka ukulangazelela kukabani. igunya lokomoya. Kwijaji okanye ipolisa, isikhokelo somoya sithatha indawo kwaye sikhokele iphupha ngokwamanqanaba, anokudideka.